Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee Danab oo gaaray deegaanno hor leh oo ka tirsan Sh/Hoose – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee Danab oo gaaray deegaanno hor leh oo ka tirsan Sh/Hoose
By kanava / August 7, 2019 August 7, 2019
Owdheegle(SONNA) Ciidamada Xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee DANAB ayaa dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo lagu baacsanayo haraadiga maleeshiyaadka naflacaariga ah ee Alshabaab waxa ay ka wadaan tuulooyin hoos yimaada degmada Aw-dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose .
Cutubyo ka tirsan ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ayaa saaka gudaha u galay deegaanka malable ee hoostaga degmada Aw-dheegle ee gobolkaasi Shabeelada Hoose,waxaana halkaasi isaga cararay maleeshiyaadkii Alshabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Qalabka sida oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in ay wadaan howlgallo aan kala joogsi laheyn oo ay argagaxisada uga xureynayaan deegaannada farakutirska ah ee ay kaga suganyihiin gobolka Shabeellaha Hoose.
Maleeshiyada Alshabaab ayaa waxaa soo wajahday cabsi xooggan oo uga imaaneysa Ciidamada Xoogga dalka, kadib markii shalay laga saaray degmada Aw-dheegle iyo deegaanno hoos yimaada oo ay ku dhibaateyn jireen dadka Shacabka ah,iyadoo ay xusid mudantahay in hore gacantooda laga baxshay deegaanno badan oo ay ka soo abaabuli jireen Weerarada iyo Qaraxyada.
Shalay ayay ahayd markii ciidanka Danab ay maleeshiyaadka Alshabaab ka qabsadeen degmaad Aw-dheegle ee gobolka Shabeelada Hoose,halkaasi oo ay ku dhibaataynayeen shacabka.
Saraakiisha Ciidanka Xooga Dalka ayaa sheegay in ay sii wadayaan howlgalada lagu baacsanayo koxda Alshabaab,kuwaasi oo haatan gabalkoodi uu sii dhacayo.